प्रधानमन्त्रीको राजसी जन्मोत्सव - Janakpur Today
प्रधानमन्त्रीको राजसी जन्मोत्सव
राजेश विद्रोही – नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करोड खर्चेर मनाएको राजसी जन्मोत्सवको विषय सबैतिर भाइरल भएको छ । केही दिन अगाडि मात्र नेकपाले ११ बुँदे अचार संहिता पार्टी्भित्र जारी गरेका थिए । तर, नेकपाका अध्यक्षबाटै अचार संहिता उलंघन भएको छ । अचार संहिता उलंघन गर्नेमा मात्र सिमित छैन् । नेपालको नक्सा अंकित १५ केजीको केकलाई टुक्राटुक्रा पारी खाएको छ । यो कतिको मनासिब छ । देशको स्वाभिमानमाथि यसले के परिभाषित गर्छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
मुलुकमा सुकुम्बासी गरिब दलित बस्तीमा डोजर लगाएर उठिबास पारिरहेकाबेला प्रधानमन्त्रीले करोडभन्दा बढी राज्यको ढुकुटी खर्चेर जन्मोत्सव मनाएका छन् । एकातिर आफ्नो नेताकार्यकर्तालाई अचार संहिता जारी गर्ने अर्को्तिर आफैले उलंघन गर्दै हिंड्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो छ । यो उदेकलाग्दो प्रवृत्तिबाट कम्युनिस्ट पार्टीको नेताको हैसियतमाथि कालो दाग लागेको छ । मुलुकको भ्रष्टाचारलाई शुन्य सहनशीलतामा झार्न प्रयास भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाटै यस्तो कार्य हुनु भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्नु हो । गफी प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्थापित केपी शर्मा ओलीको जन्मोत्सव देशको ढुकुटी सकाउने र भ्रष्टाचारीहरुलाई संरक्षण गर्ने कार्यमा अग्रसर रहेको थप पुष्टि हुन्छ । ऐतिले गरेको बदमासीको बारेमा चर्चा चुली रहँदा १५ केजीको केक हेलिकप्टरमा बोकेर एतिका अध्यक्ष सहितका टोली जन्मोत्सवमा पुग्नु के को संकेत हो ?
प्रधानमन्त्रीले अचार संहिता उलंघन गर्दा र अनावश्यक रुपमा राज्यको ढुकुटी सखाप पार्दा कुनै भ्रष्टाचार, अपराध र देश द्रोह नदेखिनेहरुको आँखामा गणेश प्रवृतिले डेरा जमाएको छ । सता र कुर्सीमा पुगेपछि जे पनि गर्न छुट हुने र शासकलाई जे पनि गर्न दिने दोहोरो कानुनी चरित्र पनि खतम छ । यस्तै उदेकलाग्दो काम नागरिकले गरेको भए भ्रष्टाचारी, देशद्रोही र साइबर अपराधीको मुद्दामा जेल चलान भइसकेको हुन्थे । यो लोकतन्त्रको कस्तो मजाक हो । अहिले मुलुकको कानुनी रक्षकहरु कहाँ छन् ? जसले दिनमा लाखौं नागरिकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुन सिकाउँछन् । करोडौंको दण्ड जुरीबाना नागरिकसँग असुल्छन् । र, कानुनी उलंघन गरेको भन्दै जेलमा हाल्छन् । आज उनीहरुलाई लाजले शिर झुकेको छैन् ? उनीहरूको आँट र सहास कहाँ कैद भएको छ । अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि पर्दैन सम्बन्धित निकायले ।
दुईतिहाई कम्युनिस्ट सरकारको प्रधानमन्त्रीको मनोविज्ञान हेर्दा बचकना भन्दा पनि बचकनाको छ । जसले सम्पूर्ण नागरिकको जन्मदिनको कामना गर्छ त्यसलाई बुढेसकालमा के जाँगर चलेको होलान् आफ्नै जन्मदिन मनाउन ? यो कस्तो विदेशी परम्परा नेपालमा भित्रियो । सबैलाई सखाप पार्ने भयो । स्कुल पढ्ने बच्चाहरुलाई मनोबल र उत्साह भर्न जन्मदिन मनाउनसम्म त ठिकै हो । तर, मर्नेबेलामा पनि जन्मोत्सव मनाउने आफैमा लाजमर्दो छ । सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो जन्मदिन मनाउन छाडेर त्यो मूल्य बराबरको केही सामग्री किनेर अनाथ बालबालिकालाई वितरण गर्छन् । त्यो काम प्रधानमन्त्रीले गरेको भए बरु हुन्थ्यो । सुकुम्बासी दलित बस्तीमा डोजर लगाएर उठिबास पारिरहेका बेला त्यसमा लगानी गरेर ओत लागाउने काम गरेको हुन्थ्यो । यसले एउटा कम्युनिस्ट नेतृत्वको मुटुमा रहेको मानवीयतालाई झल्काउँथ्यो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले करोडको खर्च गरेर जन्मोत्सव मनाए । आफ्नो नेताकार्यकर्ता तथा आसेपासेलाई खुश पारे । भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढाए । केकमानेपालको नक्सा छ । त्यसलाई केकको रुपमा काटेर खाएको छ । उनले के संकेतको रुपमा नेपालको नक्सा अंकित केक बनाएर टुक्राटुक्रा पारेर खाए । त्यो कौतुहल्ता जागेको छ । यो राजसी तरिकाकै जन्मोत्सव हो ।
कम्युनिस्ट सरकारको खोलभित्र सामन्त र जमिन्दारी प्रथाको संरक्षण हो । प्रधानमन्त्रीको यो तरिकाले सुखी नेपाली समृद्धि नेपालको सपना पुरा हुन सक्दैन । यो खुलमखुल्ला देश द्रोही कार्य हो । भ्रष्टाचारी कार्य हो । सम्बन्धि निकायको ध्यानाकर्षण होस् । अख्तियारले छानबिन गरोस् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कानुन कार्वाही होस् । अनि मात्र मुलुकको लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ ।सत्यलाई चयन र असत्यलाई एनको महसुस गर्न सकिन्छ । र, राजसी मोहलाई भंग गर्न सकिन्छ ।
(लेखक विद्रोही समाजवादी पार्टीका केन्द्रिय सदस्य हुन्)
पोलमा किचिएर बालकको मृत्यु
झण्डा मेलामा कुस्ती सुरु